Njirimara na nhazi ọkwa nke mineral na nkume | Netwọk Mgbasa Ozi
Mineral na okwute
na mineral na okwute Ha dị ezigbo mkpa ọ bụghị naanị maka geology, mana maka ịmara ụwa. Site na ha anyị nwere ike wepụta ihe okike, ihe owuwu ihe, ọla, ike ike, wdg. Ya mere, anyị ga-elekwasị anya n'isiokwu a banyere mineral na nkume. Anyị ga-ekwu maka ihe mineral dị na ụdị ha, yana ihe nkume bụ etu o si dị mkpa.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere mineral na nkume, nke a bụ post gị 🙂
1 Gịnị bụ mineral
2 Nhazi nke mineral
3 Nkume na nhazi ha
3.1 Nkume nzuzu
3.2 Sedimentary nkume
3.3 Metamorphic nkume
Gịnị bụ mineral
A na-ejikarị ihe ndị siri ike dị na mineral nweta ihe siri ike, eke na ahịhịa sitere na magma. Enwere ike ịmalite ha site na ngbanwe nke mineral ndị dị adị ma mepụta ndị ọzọ. Ngwunye nke ọ bụla nwere usoro kemịkal doro anya nke dabere kpamkpam na ngwakọta ya. O nwekwara ihe omuma di iche iche site na nhazi ya.
Mkpụrụ nye iwu atọm. Atọm ndị a na - achọta ka ha bụrụ cell ma ọ bụ sel elementrị nke ana - emegharị n’usoro dum. Ihe owuwu ndị a na-eweta ụfọdụ ụdị ọdịdị geometric nke, ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbe niile ka anya na-ahụ ya, enwere ya.
Mkpụrụ ndụ ndị ahụ na-etolite kristal ndị na-agbakọta ọnụ ma na-etolite lattice ma ọ bụ usoro ntanetị. Kristal a na-akpụ kristal na-eme nwayọ nwayọ. Nwayọọ nwayọọ nke e guzobere kristal, ka a na-enye iwu ka ihe niile ahụ na-eme, ya mere, ọ ka mma usoro mkpuchi ya.
Kristal na-etolite ma ọ bụ na-eto site na axes ma ọ bụ ụgbọ elu nke symmetry. Sistemụ kristal na-achịkọta ụdị 32 dị iche iche nke kristal nwere ike ịnwe. Anyị nwere ụfọdụ n'ime ndị isi:
Gachi ma ọ bụ cubic
Achọghị kristal nke ịnweta, ma ọ bụ nchịkọta. Ọ bụrụ na kristal abụọ ma ọ bụ karịa na-etolite n'otu ụgbọelu ma ọ bụ axis nke symmetry, weere ya dị ka akụkụ nke ịnweta ihe a na-akpọ ejima. Otu ihe atụ nke ejima bụ kristal quartz nke nkume. Ọ bụrụ na ịnweta kpuchiri elu nkume ahụ, ọ ga-abụ druse ma ọ bụ dendrite. Dịka ọmụmaatụ, pyrolusite.
N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ bụrụ na a na-akụnye mineral n'ime oghere nke nkume, a na-eme ntọala ndị a maara dị ka akụkụ. A na-ere ahịa a gburugburu ụwa maka ịma mma ha na mma ha. Olivine bu ihe atu doro anya nke uzo. Enwekwara nnukwu geodes dị ka Pulpi de Almería mine.
Nhazi nke mineral
Enwere akara dị iche iche maka ịkọwa mineral. Ka anyị malite na nke mbụ. Dika ihe mejuputara mineral, enwere ike ichikota ya n'uzo di mfe. Ha kewara:
Metallifers: Ha bụ ndị nke etinyere site na magma ma bụrụ ọla igwe. Ihe kacha mara amara bụ ọla kọpa na ọlaọcha, limonite, magnetite, pyrite, ngwakọta, malachite, azurite ma ọ bụ cinnabar, tinyere ndị ọzọ.
Na-abụghị nke ọla. N'etiti ndị na-abụghị nke metalliferous anyị nwere silicates, onye isi ya bụ silica. Ha sitere na magma na mbara igwe. Ha bụ mineral dịka olivine, ecology, talc, muscovite, quartz, ortose na ụrọ. Anyị nwekwara nnu nnu, nke a na-esi na salts na-amali elu mgbe mmiri dị n'oké osimiri na-amịkọrọ mmiri. Enwere ike ịmalite ha site na ntinyeghachi ihe ndị ọzọ. Ha bụ mineral guzobere ọdịda. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere calcite, halite, silvin, gypsum, magnesite, anhydrite, na ndị ọzọ.
N'ikpeazụ, anyị nwere mineral ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ. Emebere ndia site na magma ma obu imeghari ya. Anyị na-ahụ fluorite, sọlfọ, graphite, aragonite, apatite na calcite.
Nkume na nhazi ha
Nkume na-emejupụta nchịkọta nke mineral ma ọ bụ otu ịnweta. N'ime ụdị nke mbụ anyị nwere granite na nke ịnweta anyị nwere nnu nnu dịka ọmụmaatụ. Nkume e guzobere bụ usoro dị nwayọ nwayọ ma soro usoro dị iche iche.
Dị ka mmalite nke okwute, enwere ike ịkọwa ya n'ụdị atọ: ọkụ, sedimentary na metamorphic. Nkume ndị a anaghị adịgide adịgide, kama ha na-agbanwe ma na-agbanwe agbanwe. N'ezie, ha bụ mgbanwe na-eme na a geological oge. Nke ahụ bụ, na ọnụọgụ mmadụ, anyị agaghị ahụ ụdị okwute ma ọ bụ bibie onwe ya kpamkpam, mana nkume nwere ihe a maara dị ka usoro okirikiri.
Nkume ndị na-amaghị ama bụ ndị e guzobere site na obi jụrụ nke magma nke na-esite n'ime ụwa. O nwere akụkụ mmiri nke uwe mgbokwasị ahụ a maara dị ka Asthenosphere. Magma nwere ike ịjụ oyi n'ime na site n'ike nke eriri ụwa. Dabere na ebe magma ahụ jụrụ, kristal ahụ ga-etolite n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ na ọsọ ọsọ dị iche iche, na-ebute ụdị textures dị ka:
Granulated: mgbe magma jiri nwayọ jụụ ma mineral na-eti mkpu na ọka ndị a na-ahụ anya nke nha yiri nke ahụ.
Akwụkwọ: na-ewere ọnọdụ mgbe magma jụrụ oyi n'oge dị iche iche. Na mbụ, ọ na - amalite ịjụ nwayọ nwayọ, mana ọ na - eme ngwa ngwa karịa.
Vitreous. A makwaara ya dị ka ihe na-adịghị mma. Ọ na - eme mgbe magma jụrụ ngwa ngwa. N'ụzọ nke a, kristal anaghị etolite, mana ọ dị ka iko.
Ha bụ ndị etolitere site na ihe sitere na mbuze nke nkume ndị ọzọ. A na-ebuga ihe ndị ahụ ma debe ha na ala osimiri ma ọ bụ n'oké osimiri. Mgbe ha gbakọtara, ha na-ebili na strata. Site na usoro ụfọdụ dị ka lithification, compaction, simenti na recrystallization na - etolite okwute ohuru a.
Ha bụ nkume ndị ahụ nke sitere na nkume ndị ọzọ. A na-etolite ha site na nkume sedimentary nke meworo usoro mgbanwe nke anụ ahụ na nke kemịkal. Ndi ihe omumu banyere ala dị ka nrụgide na okpomọkụ nke na-agbanwe nkume ahụ. Ya mere, ụdị nkume na-adabere na ịnweta ọ nwere na ogo nke mgbanwe ọ gbanwere n'ihi ndị na-ahụ maka ọdịdị ala.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mineral na nkume.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Mineral na okwute